Qiso Xanuun Badan: Sheeko kaa yaabin doonto oo dhax martay nin aan guri laheyn iyo gabar ardayad ah. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Dhacdooyinka » Qiso Xanuun Badan: Sheeko kaa yaabin doonto oo dhax martay nin aan guri laheyn iyo gabar ardayad ah.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 3-08-16 1:22 PM Qofka wax yar heysta ayaa yaqaan sida wax loo bixiyo, Xaalada la yaab leh oo ka dhacday dalka Brazil ayaan idin kugu qaada dhigi doonaa barnaamijka la yaabka dunida oo aan idin kugu soo gudbino shabakada Somalistars.
Caroline oo aad u murugeysan ayuu odeygii miskiinka ahaa si layaab leh ugu yiri “Gabadheyda imisa ayaa lagu raacaa Baska, si aan kaaga bixiyo oo aan kuu siiyo lacagta aad ku raaci laheyd”. Caroline ayaase ka biyo diiday iney ka qaadato odeygan miskiinka wax lacag ah Odeygii oo markale hadal ku celinayo gabadhan ayaa yiri ” Ma hubtaa inaadan u baahneyn wax lacag ah, miyaad u laabaneysaa gurigaaga”.